Chọọ ma dochie iji nkwupụta oge niile: Microstation - Geofumadas
Nọvemba, 2014 cadastre, Microstation-Bentley
Chọọ na dochie bụ ọrụ nke eji eme ihe, M kọwaara ya otu ugboro maka Excel. Mgbe etinyere ya na nkewa ma ọ bụ CAD, ohere nke ịchọta kpọmkwem ihe anyị na-achọ dị mgbagwoju anya karị, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị nyocha site na njirimara.
Nsogbu, dochie ihe odide
Enwere m maapụ nwere ihe karịrị narị asatọ. Achọrọ m na nọmba ọnụọgụ nke na-anọchi anya n'okporo ámá, osimiri na akụ ndị ọzọ eji ọha nwere naanị otu ederede.
Ihe iseokwu ahụ bụ na iji chegharịa ya, ana m achọ na kama ịnweta 92345, nke bụ nọmba nzafe, nwere osimiri R, n'okporo ámá C, ọdọ mmiri L, wdg.
Yabụ, dịka ọmụmaatụ, achọrọ m itinye R maka ederede karịa 92,000, ebe ha bụ osimiri. Mgbe ahụ gaa n'ihe ederede dị n'elu 93,000, tinye C, n'ihi na ha bụ n'okporo ámá. bla bla bla.
Jiri okwu mgbe niile
Nke a na nsụgharị nke Microstation na-adị adị, ma site na nsụgharị V8i, ọ na-eweta obere tab nke na-atụ aro ya, ọ nwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ.
A na-eme ya mgbe niile site na Dezie> chọta ma dochie.
Ogwe a na-egosipụta, na-enye anyị nhọrọ nke ịtụkwasị ihe anyị na-achọ, ihe ọdịnaya ga-eji dochie ya, na ọnọdụ ụfọdụ dịka ijikwa mkpụrụedemede akwụkwọ, ịchọ na blocks (sel), nsu.
Họrọ nhọrọ "Jiri okwu niile", nke na-arụ ọrụ n'elu tab, nke gosipụtara ihe ndị nwere ike itinye na nchịkọta ọchụchọ.
Hụ na ọ bụrụ na m tinye ederede 92, mgbe ahụ isi atọ, enwere m ike ịnwe ọnụọgụ niile karịa 92,000. Yabụ họrọ iji dochie akwụkwọ ozi R.
Na nhọrọ Chọta, mpịakọta ngosi na ederede ahọrọ, ma si otú ahụ na-agagharị na ndị na-esonụ.
Ọ bụrụ na m na-eme "Dochie niile", a ga-anọchi anya akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile.
N'otu ụzọ ahụ, iji dochie ederede n'okporo ámá, nke nwere ọkwa n'elu 93,000, ihe m chọrọ bụ itinye 93 ... ma dochie ya na C.
Ụdị ụdị okwu ọ bụla
Ohere di iche iche iji choo ozo di iche.
A na-eji akara to gosi mmalite nke ahịrị. Were ya na anyị nwere nọmba 292010, anyị agaghị achọ ka etinye ya. Mgbe ahụ, eriri ahụ ga-abụ ^ 92 ..., nke ga - ahụ naanị ederede ndị malitere na 92, nke nwere mkpụrụ edemede atọ n’usoro.
Ihe akara $ maka njedebe. Were ya na achọrọ m ịchọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị gwụchara nọmba 10, edeziri 10 $
A na-eji isi ihe mee ihe maka ederede, akara mmuke maka efu ma ọ bụ karịa, akara + maka nọmba 1 ma ọ bụ karịa.
Ọ bụrụ na anyị na-atụ anya ịchọta naanị ASCII nọmba, mgbe ahụ, anyị na-eji acronym: dy, ọ bụrụ na anyị na-echere mkpụrụ edemede, anyị na-eji: a
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ọtụtụ ihe odide, anyị nwere ike iji brackets
Iji mụtakwuo, ana m atụ aro isi ihe ndị a: Wikipedia.
Previous Post«Previous Infrastructure Conference 2014: N'ike mmụọ nsọ maka Hispanics
Next Post Gbasara ohere Manager: Jikwaa gbasara ohere data rụọ ọrụ nke ọma, ọbụna site AutoCADNext »